Izindaba - Izinto ezidinga ukunakwa lapho kusetshenziswa izinto eziyinhlanganisela kumishini ye-CNC milling (izikhungo zemishini)
Izinto ezidinga ukunakwa lapho kusetshenziswa izinto eziyinhlanganisela emishinini yokugaya i-CNC (izikhungo zemishini)
1. Ziyini izinto ezihlanganisiwe?
Izinto ezihlanganisiwe zingahlukaniswa zibe
Izinto eziyinhlanganisela zensimbi nezensimbi, izinto ezingezona ezensimbi nezenziwe ngensimbi, izinto ezingezona ezensimbi nezingezona ezensimbi.
Ngokuya ngezici zesakhiwo, kukhona izinto zokwenziwa ezilandelayo:
Izinto zokwakhiwa kwefayibha, izinto zesangweji eziyinhlanganisela, izinto ezihlanganisiwe zokudla okusanhlamvu, izinto ezihlanganisiwe ezihlanganisiwe.
Okwesibili, izinkinga isikhungo semishini okufanele sizinake lapho sicubungula izinto eziyinhlanganisela.
1.I-Carbon fiber composite material inamandla aphansi we-interlayer futhi kulula ukukhiqiza i-delamination ngaphansi kwesenzo samandla okusika. Ngakho-ke, amandla e-axial kufanele anciphiswe lapho kubhola noma kusikwa. Ukubhola kudinga isivinini esikhulu nokuphakelayo okuncane. Ijubane lesikhungo semishini ngokuvamile liyi-3000 ~ 6000 / min, kanti izinga lokuphakelayo lingu-0.01 ~ 0.04mm / r. I-drill bit kufanele ibe namaphuzu amathathu futhi i-nhlangothi zombili noma i-two-point and nhlangothi zombili. Kungcono ukusebenzisa ummese obukhali. Ithiphu inganqamula ungqimba lwe-carbon fiber kuqala, bese izindwani ezimbili zilungisa udonga lomgodi. I-drill ye-diamond ehlongozwayo inobukhali obuhle futhi ifaka ukumelana. Ukubholwa kwezinto ezihlanganisiwe kanye ne-titanium alloy sandwich kuyinkinga enzima.-Ngokuvamile, kusetshenziswa imishini eqinile ye-carbide drill ngokuya ngamapharamitha wokusika we-titanium alloys. Uhlangothi lwe-titanium alloy lubhola kuqala kuze kudlule i-drill, futhi kufakwa i-lubricant ngesikhathi sokubhola. , Yehlisa ukusha kwezinto ezihlanganisiwe.
2. Umphumela wokusika wabagawuli abakhethekile bokugaya imishini yezinhlobo ezi-2, 3 zezinto ezintsha eziqinile ze-carbide eziyinhlanganisela kungcono. Zonke zinezici ezithile ezijwayelekile: ukuqina okuphezulu, i-engeli encane ye-helix, noma u-0 °, futhi ama-herringbone blade aklanywe ngokukhethekile angasebenza. Nciphisa amandla okusika we-axial esikhungweni semishini futhi unciphise i-delamination, ukusebenza kahle kwemishini nomphumela kuhle kakhulu.
3. Ama-chip material ahlanganisiwe anempuphu, okuyingozi empilweni yomuntu. Izihlanzisi zokuhlanza amandla amakhulu kumele zisetshenziselwe ukugeza. Ukupholisa amanzi nakho kunganciphisa ngempumelelo ukungcola kothuli.
4. Izingxenye zezinto ezihlanganisiwe zeCarbon fiber ngokuvamile zikhulu ngosayizi, ziyinkimbinkimbi ngokuma nokwakheka, futhi ziqinile ebulukhuni nasemandleni. Kunzima ukucubungula izinto zokwakha. Ngesikhathi senqubo yokusika, amandla okusika makhulu ngokwanele, futhi ukushisa okusikayo akudluliswanga kalula. Ezimweni ezinzima, i-resin izoshiswa noma ithanjiswe, futhi ukugqoka ithuluzi kuzoba kubi. Ngakho-ke, ithuluzi liyisihluthulelo sokucubungula kwe-carbon fiber. Indlela yokusika iseduze nokugaya kunokugaya. Ijubane lokusika eliqondile lesikhungo semishini ngokuvamile likhulu kune-500m / min, futhi isu lesivinini esikhulu nelokuphakelayo okuncane liyamukelwa. Amathuluzi okusika Edge-ngokuvamile asebenzisa okuqinile okusika i-carbide knurled cutters, amasondo okugaya okusanhlamvu okwenziwe ngedayimane, amadayimane okugaya amadayimane, namakhasi we-diamond okusanhlamvu okwenziwe ngethusi.